လက်ဖျံရိုးပေါ်က တက်တူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လက်ဖျံရိုးပေါ်က တက်တူး
Posted by အောင် မိုးသူ on Sep 25, 2012 in Creative Writing, Short Story | 8 comments
အုံ့မှိုင်းမှိုင်းရာသီဥတုရဲ့ နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မွန်းကြပ်နေသလိုလိုပင်။ ထိုင်နေကြ လမ်းထိပ်ရဲ့ခရေပင်သုံးပင်အောက်မှာ ဝေဖြိုးရယ် ကျွန်တော်ရယ်ရှိနေ၏။ ခပ်မှိုင်းမှိုင်းရာသီဥတုမှာ လေးအေးတစ်ချက် တိုက်ခိုက်သွားတိုင်း ခရေပန်းရနံ့က တစ်ချက်တစ်ချက် ပျံ့သင်းသွားသည်။ ဝေဖြိုးကို ကျွန်တော်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျလျက်။ မွန်းကြပ်နေသည့်ကြားမှ စကားတစ်ခွန်းပြော ရန် လေကိုတစ်ဝကြီး တစ်ချက်ရှူလိုက်သည်။
“သားကြီး….. မင်းသိပ်စိတ်ဓာတ်မကျသွားနဲ့ဦး။ မင်းလည်း ဗဟုသုတရှိပြီးသားပဲကွာ”
ကျွန်တော့်ပြောစကားကို ခေါင်းတစ်ချက်သာ ငြိတ်ပြတဲ့ ဝေဖြိုးကိုပုခုံးဖက်ကာ နှစ်သိမ့်ပေးနေမိသည်။ ကျွန်တော့်ပုခုံးကိုမှီရင်း ဝေဖြိုးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးတော့သည်။ ဝေဖြိုးအား နှစ်သိမ့်ပေးနေရင်း ဝေဖြိုးလက်ဖျံ ရိုးပေါ်ရှိ (FRIENDS) ဆိုသည့် ကနုတ်များဖြင့်အလှဆင်ထားသည့် တက်တူးအားကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်အမြင် အာရုံများေ၀၀ါးလာသည်။ အကျီ င်္လက်ရှည်အား ခေါက်တင်၍ ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်လက်ဖျံရိုးပေါ် တက်တူး အား ကျွန်တော့်ကြည့်ကား တစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိရင်း ဝေဖြိုးလက်မောင်းကိုပုတ်ကာညှစ်ရင်း ခေါင်းကိုတစ်ချက် ပွတ်လိုက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အံ့သြစရာပြည့်နှက်လွန်းလှသော ကံကြမ္မာကို အရွဲ့တိုက်ကာ ဟားတိုက် ချင်မိသည်။ အုံ့မှိုင်းမှိုင်းရာသီဥတုနှင့် ခရေပန်းရနံ့သင်းသင်း ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားကျော်ဖြတ်ကာ သွားသည်။
အိမ်ရှေ့မှခေါ်သံကိုကြားကြားချင်း စည်သူဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်သည်။
“ငါမခေါ်ရင်ရော မင်းကြားမှာမို့လို့လား နွားရဲ့”
စည်သူက ပြုံးစိစိဖြင့် မျက်ရိပ်ပြကာ….
ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်နားရှိ လမ်းမတန်းတွင် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် ထိုင်နေကြဘီယာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ရှိသည်။ ဝေဖြိုး ၊ စည်သူနှင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပေါင်းလာသော ငယ်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိသော မကွယ်မ၀ှက်တမ်းဆိုလျှင် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အတွင်းသိအစင်းသိ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ စည်သူ၏လက်ဖျံရိုးတွင် လည်း (FRIENDS)ဆိုသည့် ကနုတ်များဖြင့်ထိုးထားသော တက်တူးတစ်ခုရှိသည်။ ထိုတက်တူးပင်လျှင် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ဝေဖြိုးကြည့်ရသည်မှာ မနေ့ကနှင့်မတူ လန်းရွှင်လျှက်။ ဝေဖြိုးပုံစံမြင်ရတာနှင့်ပင် ကျွန်တော် တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာသွားသည်။ စည်သူကတော့ ထိုအကြောင်းအရာအား မသိပေ။ သုံးယောက်သား ပုခုံးချင်းဖက်ကာ ထိုင်နေကြနေရာလေး “Good Friend” ဆိုသော စားသောက်ဆိုင်လေးသို့ ချီတက်ခဲ့ကြ သည်။
ကျွန်တော်နှင့်စည်သူနှစ်ယောက်သား ပါးစပ်မဟသေးခင် ဝေဖြိုးထံမှဦးစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော်နှင့် စည်သူ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ အရင်ကဆိုလျှင် ဝေဖြိုးသည် ခပ်အေးအေးပင် စားသောက်စရာများကို အော်ဟစ်ကာဘယ်တော့မှ မမှာပေ။ ဝေဖြိုးက ကျွန်တော်နှင့်စည်သူ အား ပြုံး၍ကြည့်ကာ….။
“ဟရောင်တွေ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ ငါ့ကို အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာလား……”
ပြောရင်းဆိုရင်းပင် သုံးယောက်သားရှေ့ စည်ဘီယာသုံးခွက်ရောက်လို့လာသည်။ ဝေဖြိုးမှစကာ….
ဘီယာခွက်အားတေ့ရင်းပင် ဝေဖြိုးမျက်နှာကို ကျွန်တော်အကဲခတ်နေမိသည်။ ပျော်ရွှင်နေသော်လည်း ဝေဖြိုးမျက်လုံး၏အရိပ်အယောင်များကို ကျွန်တော်နားလည်နေသည်။ တစ်ခွက်….နှစ်ခွက်…..သုံးလေးခွက်နှင့်
“ဟေ………” ကျွန်တော့်နှုတ်မှ စကားလုံးတစ်လုံးသာ ထွက်သွား၏။ နောက်ထပ်စကားမဟသေးခင်မှာပင်။ ဝေဖြိုးသည် သူ၏ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲမှ ကြေမွနေသော စာရွက်တစ်ရွက်အား စည်သူအားလှမ်းပေးလိုက် သည်။ အနောက်ဘက်ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲတွင် ထည့်ထားသောကြောင့် စာရွက်မှာနွမ်းကြေနေဟန် ပုံပေါက်နေသည်။ စည်သူသည် ထိုစာရွက်ထား ဖြည်းဖြည်းခြင်းဖြည်ကာကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်နှုတ်မှ မည်သည့်စကားလုံးမှ ပြောမထွက်တော့ချေ။ စည်သူ့မျက်လုံးများ ခဏတာမှေစင်းသွားသည် တဖြည်းဖြည်း မျက်မှောင်ကျုတ်ကာ ဝေဖြိုးဆီသို့ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်၏။
စည်သူမေးလိုက်သော မေးခွန်းအား ဝေဖြိုးခေါင်းသာတစ်ချက်ငြိတ်ပြသည်။
“ဟရာင် မင်းဒါက ဘယ်လို….ဘယ်ကနေ…..” စည်သူ့စကားမဆုံးမှာပင် ဝေဖြိုးက လက်ကာပြသည်။ လက်နှစ်ဖက်အားခေါင်းကိုနှိပ်ကာ…….
“မမေးနဲ့ ဒါတွေငါ့ကို မမေးနဲ့……။ မင်းတို့ငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ” ဝေဖြိုးက ကျွန်တော့်အားလက်ညှိုးထိုးကာ
“ဟရောင် သူရိန် မင်းငါ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ”
“ဟရောင် စည်သူမင်းကော……..” ဝေဖြိုးအဖြေကို စည်သူကြားကြားချင်းပင် တစ်ချက်ရယ်ကာ
“ငါလည်း အရင်အတိုင်းပါပဲကွာ….။ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့ သူတွေမှမဟုတ်တာ မင်းကလည်း… ကဲလာကွာ နောက်တစ်ခွက်………”
ခွက်သုံးခွက်တိုက်သံနှင့် ရယ်မောသံများ ဆူညံကာသွားသည် ထိုအထဲက ခွက်တစ်ခွက်ရဲ့အသံကတော့ ခပ်အက်အက်ဖြစ်နေသည်ကို ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရသည်။
နေ့တာတို၍ ညတာရှည်သည့် ဆောင်းရာသီညနေခင်းက ယခင်ရာသီများထက်ကို ပို၍မှောင်ကာနေသည်။ မြောက်ပြန်လေညှင်းအေးအေးနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ခရေပင်တန်းအောက်တွင် ရှိနေကြသည်။
“မင်းနေကောင်းရဲ့လား ဝေဖြိုး” စည်သူအမေးကို ဝေဖြိုးမှပြုံးကာ
“ငါနေကောင်းပါတယ် အရင်အတိုင်းပါပဲ….” ပြောရင်းနှင့်ပင် လက်ဖျံရိုးမှ တက်တူးအားကြည့်ကာနေသည်။
“မင်းတို့တွေ သတိမရဘူးလားကွ…” ဝေဖြိုးအမေးကို ကျွန်တော်နှင့်စည်သူအတူတူ စကားသံထွက်သွားကြ၏။
“ဒါလေကွာ။ ဒီတက်တူးသွားထိုးတုန်းက ငါတို့တွေဘယ်လောက် ပြောစရာကောင်းသလဲ။ ငါတို့မိသားစုထဲမှာ ငါတိုကတွေအားလုံးက တစ်ဦးတည်းသောသားတွေ။ သူငယ်ချင်းဖြစ်တော့လည်း အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် တက်တူထိုးတော့ ဒီ (FRIENDS)ဆိုတဲ့ တက်တူးကို သုံးယောက်တူတူထိုးခဲ့ကြတာ။ အဲသည်တုန်းက ငါဘယ်လောက်ပျော်ခဲ့တယ်မင်းတို့ထင်လဲ။ ငါ့ဘ၀မှာ ငါ့အဖေ၊အမေပြီးရင် မင်းတို့နှစ်ယောက် ငါ့မိသားစုလို့ ခံယူထားတာ။ အဲသည်တုန်းက ငါသိပ်ပျော်တာပဲ”
စကားတွေဆက်တိုက်ပြော မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြင့် မျက်ရည်ရစ်ဝဲတက်လာတဲ့ ဝေဖြိုးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ပေ။
“ငါတို့လည်း တူတူပါပဲ ဝေဖြိုးရာ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆို ငါတို့တွေက အတူရှိနေပြီးသားပဲဆိုတာ ဘယ်သူမှထုတ်မပြောလဲ သိနေကြတာမဟုတ်လား။ မင်းသိပ်ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့ကွာ”
“သူရန်၊ဝေဖြိုး သွားနေကြနေရာ သွားရအောင်ကွာ…….”
ကောက်ခါငင်ကာထသွားသည့် ဝေဖြိုးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်သက်ပြင်းတစ်ချက်သာချမိသည်။ ချမ်းစိမ့်စိမ့် ဆောင်းရာသီက အေးစိမ့်မှုကိုမပေးနိုင်ချေ။ ကျွန်တော့်ရှေ့ကြွေကျလာသော ခရေးပန်းလေးတစ်ပွင့်အား ကောက်ကာ မွှေးလိုက်မိသည်။ ကြွေကျလာပေမယ့် မွှေးပျံလတ်ဆတ်နေသော ခရေပန်းကလေး။
မနက်(၆)နာရီကတည်းက ကျွန်တော်နိုးနေမိသည်။ ဒီနေ့မနက် အလုပ်ပိတ်သည်နှင့် ဝေဖြိုးနှင်စည်သူကို ခေါ်၍ နံနက်စာသွားစားမည်ဟု ဝေဖြိုးအိမ်ဖက် ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့သည်။
“သြော်…..သား….သူရိန် ဝေဖြိုးမရှိဘူးကွဲ့” အိမ်ပေါက်ဝမှ ဝေဖြိုးအမေပြောသော စကားသည် ကျွန်တော့်အား အံ့သြသွားစေသည်။
“ကျိုက်ထိုဘက်က အန်တီတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်လို့ဆိုပြီး မနေ့ညကတည်းက ထွက်သွားတယ်လေ သားတို့မသိဘူးလား။ အန်တီက သားတို့သိတယ်ထင်လို့…”
“သြော်ဟုတ်လား အန်တီ။ ကျွန်တော်လည်း ကြားတော့ကြားမိသား ဒီလောက်စောမယ်မထင်လို့ခင်ဗျ။ ဒါဆို ကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမယ်အန်တီ”
“ဒီကောင် ငါတို့ကိုမပြောဘဲ ဘာလို့ထွက်သွားတာလဲ”
“သူပြောမထွက်လို့နေမှာပေါ့ကွာ…မင်းကလည်း” စည်သူရဲ့စကားကို ကျွန်တော်ပြန်ဖြည်လိုက်သည်။
“ငါလည်း ဘယ်လိုပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး……….” စည်သူက ပြောရင်းပင် သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်၏။
ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဆောင်းကို ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်ကျော်သွားသည်။ စည်သူလည်း သူ့အလုပ်နှင့်သူမို့ ကျွန်တော့်ဆီ သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ချေ။ တစ်ခါတစ်ရံသာ ခရေပင်အောက်ထိုင်ပြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များပြောကာ ရယ်မောကြသည်။ လက်ဖျံရိုးမှ တက်တူးအားကြည့်၍ ဝေဖြိုးကိုသတိရမိသည်။
ခြံပြင်မှ ခေါ်သံတစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်ထွက်လာမိသည်။ ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသောသူသည် ကျွန်တော် ခန္ဓာကိုယ် ၀ုန်းကနဲခံစားလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်နှုတ်မှလည်း………
ကျွန်တော်ပြေးကာ ဝေဖြိုးအားသိုင်းဖက်လိုက်သည်။ ခေါင်းတုံးနှင့် မျက်နှာချောင်ကာ အနည်းငယ်ပိန်သွားသည် မှအပါး ဘာမှသိပ်မထူးခြားချေ။ ဝေဖြိုးမျက်နှာပေါ်တွင် မျှော်လင့်ချက်များရှင်သန်နေသည်ကို ကျွန်တော်ခံစား လိုက်မိသည်။
“တီ..တီ……….တီ.တီ….တီတီတီ…” ကားဟွန်းသံကြောင့် ကျွန်တော်နှင့်ဝေဖြိုးလှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။
“ဟရောင် ငါ့ကောင်ကြီးတွေ……………” အသံကြားမှပင်…….
“အာ…….စည်သူ နွား…….ကောင်းစားနေပါလား……..ဒီမှာလေ ဝေဖြိုး…….”
“လာကွာ …….ကားပေါ်တက် ဆိုင်ရောက်မှ စကားပြောကြမယ်…….”
GOOD FRIENDS ဆိုသည့်ဆိုင်ကလေးတွင် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် ပြန်လည်ဆုံဖြစ်ကြသည်။ ခြောက်လကြာကြာ မတွေ့ရသောကျွန်တ်ာတို့တွေသည် နှစ်ပေါင်းများစွာမတွေ့ရသော ညီအစ်ကိုများပမာ ပြုံးရွှင်လျှက်ပင်။ ဝေဖြိုးကို ကျွန်တော်တစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်သေးသည် ဘာမှမူမပျက်ချေ။
“ဟရောင် စည်သူ..နွား ဝေဖြိုး မှာကွာ… ညီလေးရေ စည်သုံးခွက်ဟေ့…. ကြက်စွပ်ပြုတ်တစ်ပွဲ… ၀က်နံရိုးကင် သုံးချောင်းပေး….”
“ဝေဖြိုး မင်းရောအခြေအနေကောင်းရဲ့လားကွ…ဘယ်လိုလဲ” စည်သူပြောစကားကို ဝေဖြိုးက ခေါင်းသာငြိတ်ပြ ရုံ ငြိတ်ပြသည်။
ကြက်စွပ်ပြုတ်ပူပူနွေးနွေးက အငွေ့တထောင်းထောင်းနှင့်။ ဝေဖြိုးမှ……..
ကြက်စွပ်ပြုတ်ပန်းကန်ထဲမှ အရေခွံတစ်ဖက်အား ဇွန်းဖြင့်ကောက်ကာ မြည်းလိုက်သည်။
“အား……..ထွီး…ပူလိုက်တာကွာ…ပူလိုက်တာ…” ဝေဖြိုးမှ ပျာပျာသလဲအော်ကာ ပါးစပ်မှကြက်သားဖတ်မှာ စွပ်ပြုတ်ထဲသို့ ပြန်ရောက်သွား၏။
ထိုအဖြစ်ကိုကြည့်၍ ကျွန်တော်နှင့်စည်သူ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ ထိုအချိန် စည်သူမှ
“ဟရောင်…စည်သူ ဒါသောက်လည်းရတာပဲကွာ မင်းကလည်း….” ဝေဖြိုးမှ စည်သူ့လက်ကိုပြန်တားကာ ပြောသည်။
“အာ…….မင်းကလည်း…မင်းထွေးလိုက်တာ ၀င်သွား……………….” စည်သူ့စကားမဆုံးမီ ကျွန်တော် စည်သူ့အား လက်ကာပြလိုက်သည်။ ထိုအခါ ဝေဖြိုးမှ
စည်သူမျက်နှာတစ်ဖက်သို့လွှဲသွားသည်။ ဝေဖြိုးကို ကျွန်တော်ကြည့်သောအခါ ဝေဖြိုးမျက်နှာပျက်နေသည်။
“ဝေဖြိုး ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ…..။” စည်သူ့စကားကို ဝေဖြိုးမှလက်ကာပြလိုက်သည်။
“ရတယ်…စည်သူ….အဲသည်အကြောင်းမင်းနည်းနည်းတော့ သိထားသင့်တယ်… ဒီလောက်လေးနဲ့…” ပြောရင်းပင် ဝေဖြိုးမျက်ဝန်းထောင့်မှာ အရည်အချို့က စီးဆင်းလာတော့သည်။
“ဝေဖြိုး…အဲလိုမဖြစ်နဲ့လေ….” ကျွန်တော်ဝေဖြိုးကို ပုခုံးဖက်ကာ….
“မင်းကလည်းကွာ….ငါသောက်ပါတယ်….လာတူတူသောက်မယ်….” ပြောရင်းပင် စွပ်ပြုတ်ရည်အား ကျွန်တော် သောက်လိုက်သည်။ ငရုတ်ကောင်းနံ့မွှေးမွှေးဖြင့် ချက်ထားသောစွပ်ပြုတ်သည် ပိုချိုနေသယောင်ယောင်။
ခရေပင်တန်းအောက်တွင် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရှိနေသည်။ နွေရာသီရဲ့ အိုက်စပ်စပ်ညတစ်ညက အားလုံး ကို ပိုမိုပူလောင်စေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ခရေပန်းရနံ့လည်း မရချေ။ လသာပေမယ့် တိမ်မှိုင်းမှိုင်းအချို့က ဖုံးကွယ်နေကြသည်။
နံနက်အစောကြီးရောက်လာသော စည်သူ့အား ကျွန်တော်အံ့သြနေမိသည်။
စည်သူ့လက်ထဲမှ စာတစ်စောင်အား ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းပေးလိုက်သည်။
“မနက်အစောကြီးပဲ ဝေဖြိုးအမေငါ့ကိုပေးသွားတာ မျက်နှာလည်းသိပ်မကောင်းဘူး။ ဝေဖြိုးက မှာသွားတယ် ငါတို့နှစ်ယောက် တူတူဖတ်ပါဆိုလို့….ဆိုပြီး”
စာရွက်ခေါက်လေးအား ကျွန်တော်နှင့်စည်သူ ပြိုင်တူလှန်လိုက်သည်။
ငါတို့တစ်ရက်တော့ပြန်တွေ့မှာပေါ့။ မင်းတို့ကို ငါမမေ့ပါဘူးကွာ ငါလုပ်စရာလေးတွေရှိလို့ မတိုင်ပင်ဘဲ ထွက်သွားမိတယ်။ နောက်………ငါဘုန်းကြီးဝတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အားလုံးပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ အဲသည်အရာ ငါ့ဆီဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာ။ ငါဘယ်လိုမှ တွေးမရဘူးကွာ။ တွေးလို့ရတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ငါတို့ လက်ဖျံရိုးက တက်တူးပဲ။
ကျွန်တော်နှင့်စည်သူ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားမိသည်။ စည်သူမျက်လုံးမှာမေးခွန်းပေါင်းများစွာနှင့်။
အဲသည်တုန်းကငါတို့တွေ အတူတူတစ်ဆက်တည်း ထိုးခဲ့ကြတာလေ။ သေချာတယ် မသေချာတယ်ဆိုတာ တော့ ငါမသိဘူး။ အဲသည်အရာက ဘယ်ကနေဘယ်လိုဆိုတာလည်း ငါမတွေးတော့ဘူး။ ငါတစ်ခုမှာချင်တယ် ငါတောင်မနောက်ကျသေးဘူး။ မင်းတို့လည်း သေချာအောင် ဂရိုစိုက်စစ်ဆေးကြည့်ဦးကွာ။ တွေ့တဲ့နေ့က ပြောမလို့ပဲ ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ငါပြောမထွက်ခဲ့ဘူးကွာ။ မင်းတို့နဲ့ ငါတစ်ရက် ပြန်တွေ့ကြမယ် အသေအချာကိုပြန်တွေ့ကြမယ်။ ငါကို ခွင့်လွတ်ပါကွာ။ မင်းတို့ကိုငါတကယ်ချစ်တာပါ။
စာဖတ်ပြီးပြီးချင်းပင် ကျွန်တော်နှင့်စည်သူ လက်ဖျံရိုးပေါ်က တက်တူးကို ကြည့်လိုက်မိသည်။ ခရေပင်တန်းရဲ့ နွေရာသီမှာ ရွက်ခြောက်တွေက လွင့်ကြစမြဲ။ သည်အချိန်မှာ ကြွေကျလာမယ့် ခရေပွင့်လေးလည်း မတွေ့ရ တော့ချေ။ နံနက်ပိုင်းနေရာင်ခြည် ပူရှရှက ကျွန်တော်နှင့်စည်သူပေါ် ညွှတ်ကျလို့လာသည်။ ကျွန်တော်စည်သူ့ ပုခုံးအား တစ်ချက်ညှစ်ကာပုတ်လိုက်သည်။ နေရောင်ဘယ်လောက်ပင်ပူပြင်းပါစေ ဘယ်အရာတွေ ဘယ်လို ပြောင်းလဲပါစေ။ တူတူသွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် အားယူရဦးမည်။ လူထဲက လူတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သော် ငြားလည်း။ ထိုလူထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အားယူကာကြိုးစားရဦးမည်။
စက်တင်ဘာ ၂၄ရက် ၂၀၁၂ခုနှစ်
တနင်္လာနေ့ ည ၁၁နာရီ ၁၇မိနစ်
တစ်ဂယ်တော့ တက်တူးဆရာက သုံးယောက်ကို တစ်ရက်ထဲ ထိုးဖို့ မလွယ်ဘူးလားလို့ 
ပုံကြမ်းဆွဲ..အပ်စိုက် ထိုး.. ဆိုတော့
ထိုးတဲ့သူ အကြောတတ် တတ်သလားလို့ ပါ
အဖြေညှိဖို့ ပဟေဠိလေး လုပ်ထားတယ်ပေါ့လေ…..
ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးတောင် ပြောင်းကပ်လို့ ရသေး….
မထိုးတာအကောင်းဆုံး ပါပဲဗျာ ကိုကြောင့်လည်း ဒီလိုတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ့့့့  လက်မထောင်သွားပါတယ်ဂျာ့့့ 
ဟွန့်ထိုးမာပဲ……….
ပာိုက် သားကြီး နာ ငါ့လက်မှာ တက်တူးထိုးထားဘူး